Konfiransii Qorannoo Biyyoolessaa: Yunvarsiitii Arsiitti
Konfiransii Qorannoo Biyyoolessaa: Yunvarsiitii Arsiitti Featured
Galmi Waajjira Dhaabbata Demokraasummaa Ummata Oromoo (DhDUO) Damee Godina Arsii, Magaalaa Asallaatti argamu tibbana hayyoota biyya keessaafi alaa irraa baba'an, abbootii Gadaafi keessummoota waamichi taasifameefiin guutameera.
Kaayyoon walitti qabama namoota kanneeniis Konfiransii Qorannoo Biyyoolessaa tokkoffaarratti hirmaachuuf yoo ta'u, sagantichi qophaa'ee namoonni kunneen akka walargan kan taasisemmoo 'third generation' (dhaloota sadaffaa) jedhamuun kan beekamu Yunvarsiitii Arsiiti.
Konfiransiin kun sadarkaa biyyoolessaatti yeroo jalqabaatiif haa adeemsifamu malee kanaan dura sadarkaa biyyaalessaatti konfiransiiwwan afur qopheessummaadhuma yunvarsiitichaatiin gaggeeffamaniiru.
Kaayyoonsaas hayyoonni dhimmoota addaddaarraatti qorannoo adeemsisan bu'aa qorannoosaanii dhiheessuun galtee akka irraa argatan akkasumsas, muuxannoo itti waljijjiiran taasisuuf akka ta'eedha Diinii Ittaanaan Qorannoofi Tajaajila Hawaasaa, Doktar Qaasim Kimoo kan nutti himan.
Akka isaan jedhanitti, konfiransichi mataduree, “Qorannoofi Tajaajila hawaasaa haaraatiin misooma waaraa fiduu” jedhuun adeemsifamuunsaa adeemsi qorannoo keenya kalaqa haaraarratti akka xiyyeeffatu taasisuufi kan bu'aa biznasii qofaarratti hundaa'e akka hintaane gochuun misooma waaraa biyyattii dhugoomsuuf fayyada.
Guddinni waaraa ida'ama wantoota sadiiti; isaanis hawaasummaa, dinagdeefi naannawa ta'uu eeranii, kanneen walfaana qorannoodhaan yoo deemsisuun danda'ameefi tajaajila hawaasaarratti akka xiyyeeffatan yoo taasifame misoomni waaraa akka dhufu addeessu. Konfiransiin biyyoolessaa kunis kanarratti kan xiyyeeffateefi qorannoowwan filataman 40n dhihaatanii marii bal'aan kan irratti adeemsifame akka ta'e himu.
Waltajjicharratti qorattoonni biyya keessaa bu'aa qorannoosaanii warreen kaaniif dhiheessuun galtee kan irraa argataniifi kan muuxannoo walirraa qooddatan yoo ta'u, qorattoonni biyya alaa jiraachuun isaanii ammoo muuxannoon argamu daran akka bal'atuuf carraa gaarii ta'uu ibsu. Kana malees Yunvarsiitiin Arsii sadarkaa biyyoolessaatti beekamtii akka argatuuf karaa kan saaqu ta'uusaatiin bu'aansaa dachaa ta'uu himu Dr. Qaasim
Daarektarri Qorannoofi Maxxansaalee Yunvarsiitii Arsiifi qindeessaan konfiransichaa Doktar Adam Kadiir gamasaaniin, yunvarsiichi akkuma yunvarsiitiiwwan kaanii hojii baruufi barsiisuu, qorannoofi qo'annoo adeemsisuufi tajaajila hawaasaarratti xiyyeeffatee hojjetaa jiraachuu himaniiru. Keessumaa qorannoowwan bu'aa barbaadamu akka fidaniifi qaamolee seera qopheessaniif galtee akka ta'aniif xiyyeeffannaa olaanaadhaan hojjetaa jiraachuu eeru.
Qorannoowwan taasifaman daran qulqullina akka qabaataniifis konfiransiiwwan yeroo yerootti adeemsifaman bu'aa guddaa qabaachuusaaniifi konfiransiin biyyoolessaa kunis qaamuma kanaa ta'uusaatiin muuxannoon yaadame kan irraa argamuusaati kan ibsan. Keessumaa hayyoonni biyyoota Kaanaadaa, Ameerikaa, Jarmaniifi Keeniyaa irratti hirmaachuunsaanii konfaransicha adda akka taasisuufi muuxannoon argamu isa duriirra akka caalu dubbatu.
Warqaaleen qorannoo 40 ta'an waltajjii kanarratti dhihaatan akkasumaan kan filataman osoo hintaane jalqaba beeksisa ba'een axareeraawwan 223 dhihaatan keessaa 69 filatamanii waraqaasaanii guutuu akka ergan taasifamuus eeranii, kanneen keessaas maniiwwan misooma waaraa 17n waliin kanneen walsimatan filatamanii dhihaachuusaniitiin furmaata barbaadamu yeroo yaadame keessatti fiduuf bu'aa akka qaban himu Dr. Adam.
Waraqaaleen qorannoo dhihaatan akka dhimmamtoota bira ga'aniif ogeessonni addaddaa qaamota dhimmichi ilaallatu irraa akka hirmaatan taasifamus kan himan daarektarichi kunimmoo qorannoleen mooraa yunvarsiitii yookiin naannawa yunvarsiitiiwwan qofaatti akka hindaangeffamneef carraa kan uumu ta'uu ibsu.
Hayyuun Kaanaadaa irraa dhufan Doktar Huseen Hamdaa, konfiransiin akkanaa qophaa'uunsaa qorannooleen yunvarsiitiiwwaniin hojjetaman beekamtii akka argataniif karaa kan saaqu ta'uurra darbee hanqinoonni jiran sirriitti ba'anii mariin kan irratti taasifamu ta'uusaatiin qorannoowwan qulqullina qaban akka qophaa'aniif ni gargaaru jedhu.
Yunvarsiiwwan Itoophiyaa hundisaanii qorannoowwan addaddaa adeemsisanis hedduun qulqullinni qorannoo isaanii garuu gaaffii keessa waan jiruuf waltajjiin akkanaa baratamuufi hayyuuleen biyya alaas akka irratti hirmaatan taasisuun akka barbaachisu ibsu.
Walumaagalatti, qorannoon mariidhaan deggarame rakkoo ummataafi biyyaa furuuf humna waan qabuuf muuxannoon Yunvarsiitii Arsii babal'achuu qaba.
Torban kana/This_Week 43544
Guyyaa mara/All_Days 1468324